KPZ: Draftman တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်
11 comments - Postacomment Labels: မှတ်စု
( ဒီပို့စ်လေး ဖြစ်လာအောင် အမြဲတွန်းအားပေး အချက်အလက်တွေ ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးမောင် နဲ့ ကိုမိုးမြင့်တိမ် တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း )
Moe Myint Tane - October 19, 2008 at 4:07 AM
ညီမလေးရေ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ Draftsman ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဘို့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အဆင့်ဆင့်ပုံစံ ရေးဆွဲပေးရပုံတွေကို တခုခြင်းစီ တင်ပြသွားတာ တကယ့်ကို ဗဟုသုတ ရပါတယ်ညီမလေးရေ။ ဒီလိုပိုစ့်လေးကို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါညီမလေးရေ။
HAPPYCLOUD - October 19, 2008 at 3:16 PM
ညီမလေးရေ... အတော်လေးကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးတစ်ခုပါပဲကွာ.... Draftsman တယောက်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူတာတွေကို... ပေါက်ကွဲချက်တွေနဲ့ပြောသွားတာပဲနော်... AutoCAD ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်ညီမလေး..
HAPPYCLOUD - October 20, 2008 at 5:51 AM
ညီမကြီးရေ... ဂွတ်တယ်ဟေ... ရေးသာရေး ဆက်တိုက်ဖတ်နေတယ်...း) ကိုဖောင်မိုးရဲ့ အခန်းဆက်ကြီးလည်း တွန်းလိုက်အုံး...(ဟီး ဟီး လမ်းကြုံတုန်းလေး ၀င်ကြပ်သွားတယ် ကိုဖိုးမောင်ရေ)
ဘလူးဖီးနစ် - October 20, 2008 at 9:22 AM
ညီမလေးရေ ဒီပို့စ်လေးက တွေးစရာတွေ အများကြီး ရသွားပါတယ်။ အကို့အနေနဲ့ draftsman တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကြီးပုံ နဲ့ အရေးပါပုံကို ကောင်းကောင်း ပိုနားလည်သွားပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် စိတ်ကူးထဲ ပေါ်လာတာကို အကောင်အထည် မြင်ရအောင် ဖန်တီးပေးရတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ အကို့အနေနဲ့ ဆို မကျွမ်းကျင်ဆုံး ဘာသာရပ်ပါပဲ။ အကို့ ညီမလေး တစ်ယောက်က အော်တိုကဒ်တက်ပြီး စင်ကာပူလာဖို့ လုပ်နေတော့ အကိုတော်တော်လေး စိတ်ပူပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ draftsman တစ်ယောက်အတွက် အော်တိုကဒ် တတ်ရုံနဲ့ မလွယ်ဘူးဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားလို့ပါ။ တကယ်တော့ draftsman ဆိုတာကို နှာခေါင်းရှုံ့တတ်ကြတဲ့သူတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ပြီး draftsman မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ သူတွေက အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းတဲ့ သူတွေပါ။ ပြည့်ဝပြီးသား လူတိုင်းဟာ သူများရဲ့ professional ကို လေးစားကြပါတယ်။ engineer တစ်ယောက် draftsman လုပ်တာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ အင်ဂျင်နီယာ နာမည်ခံပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ ကိုယ် အဆင်ပြေရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လက်တွေ့မှာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးချနိုင်ဖို့ က အဓိက ပိုကျပါတယ်။ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ ရှိနေပေမယ့် အညမည အပြန်အလှန် ကူညီပံ့ပိုးပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်နေကြရတယ်ဆိုတာ ကို နားမလည်နိုင်သေးရင် အဲဒီလာပြောနေတဲ့ သူတွေကိုယ်တိုင်က အင်ဂျင်နီယာ နာမည်ခံ သာ ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ အကိုကတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
KPZ - October 20, 2008 at 2:02 PM
အကိုတွေအားလုံး ကျေးဇူးပါ။ ကိုဘီလူးဖီးနစ် ကော်မန့် အ၇ှည်ကြီးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားပမယ် အကို။
Mogok Thar - October 21, 2008 at 10:10 AM
I'm an Engineer related in design field and working as an Assistant Architect but whoever asking what are you doing. I always reply *I'madraftsman*.
Yeah, draftsman's work is not easy and your post show enough of that jobs' responsibility. Just like Blue Phoenix said... Draftsman is not an easy job. Keep moving on, ..
puluque - October 22, 2008 at 4:47 PM
ကျတော့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ပြောလိုက်သလိုပါပဲလား။ ဘာလုပ်လဲဆိုရင် draftman လို့ဖြေလိုက်ရင် .. အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးတွေကို မြင်ရလို့လေ။ တစ်ခါတုန်း ကသယ်ရင်းတစ်ယောက် ပြောသွားတာကို မှတ်မိတယ်။ draftman ဆိုရင် လေးထောင့်၊အဝိုင်းနဲ့ မျဉ်းဆွဲတက် ရင်ရပြီတဲ့။ ဟားဟား.. တစ်ခါတလေ အလုပ်ထဲမှာ ပုံဆွဲ လို့ စိတ်တိုလာရင် အဲ့ဒီကောင်းကို သတ်ချင်တယ်. အဲဒီလို အလုပ်မျိုး မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟိုတလောက အင်တာနက် ဂျာနယ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အော်တိုကတ် တစ်လပြတ်သင်တန်းကြော်ငြာတွေ အများကြီးပဲ။ ဟီး ဟီး ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ တစ်နေ့ နှစ်နာရီ သုံးနာရီနဲ့ တစ်လပြတ်သင်တန်း။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်တဲ့ အခါ ဒုက္ခနဲ့ လှလှတွေကြတာပေါ့။ နောက် ပိုင်း ဆက်လေ့လာ နိုင်ရင်၊ အင်ဂျင်နီယာ အမြင်ရှိတဲ့လူဆိုရင် တော့ ကောင်းတာပေါ့လေ။ ကျတော်လဲ တစ်ခါတလေလဲ အလုပ်ပြောင်း လုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့။ drafter ကို စိတ်နာလာလို့လေ။ ဟိုလူလဲ drafter ဒီလူလဲdrafterဆိုတော့။
may - October 22, 2008 at 5:12 PM
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ post လေးပါ. Autocad ပဲဆွဲတတ်တယ်ဆို Autocad Operator တစ်ယောက်ပဲဖြစ်မှာပါ. ဘယ်တော့မှ Skillsfull Drafter (Drafts engineer) တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်တာ ကိုယ်တွေ့မို့သိပါတယ်.. Engineering Background နဲ့ Engineering Sense ရှိဖို့ကလိုကိုလိုအပ်ပါတယ်.Structural Drafter တစ်ယောက်နဲ့ Archi Drafter တစ်ယောက်တောင်
မတူပါဘူး. Archi Field က Drafter တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပိုခက်ပါတယ်.. Archi အမြင်ရှိဖို့ပို မလွယ်ပါဘူး…ကျမက Structural ပဲဆွဲဘူးတဲ့ drafter ပါ… same project ပဲ Structural ပိုင်းကနေ Archi ပိုင်းပြောင်းဆွဲရတော့ အတော်ရွာပတ်ပါတယ်…
ကျမတို့ company ကသက်တမ်း နှစ် ၁၀၀ကျော်ရှိပီ
ဖြစ်တဲ့ တစ်ခုပါ. သူ့ company လုပ်သက် 2နှစ်ကျော် Drafter တစ်ယောက်နဲ့ engineer တစ်ယောက်ရဲ့လစာ S$100 ပဲကွာပါတယ်. ဘယ် company မဆို Drafter ပေမဲ့လည်း အရည်အချင်းရှိရင် ရှိသလို Engineering တစ်ယောက်လို အရေးပေးပါတယ်. Autocad ပဲဆွဲတတ်တယ်တဲ့ Autocad Operator ပဲဖြစ်ချင်လား Skillsfull Drafter ပဲဖြစ်ချင်လားဆိုတာက တော့ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲ
ခေတ - Dubai
ဗီလိန် - October 22, 2008 at 10:56 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ Draftsman ဆိုတာ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ ခိုင်းဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ ရေသောက်မြစ်ပါ။ ထင်သလောက်မလွယ်တာအမှန်ပါ။ တကယ်ကြီးကိုမလွယ်တာပါ။ AutoCAD နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဖြေရှင်းလို့မရတာတွေအများကြီးပါ။ အဲဒါတွေကို Draftsman တွေရဲ့ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်နဲ့ ဖြေရှင်းရတာပါ။
yuyu - December 13, 2008 at 2:11 PM
I want to know basic requirement of autocad. Please Could you explain about this thing for an Electronics engineer ?
nanda - May 22, 2009 at 12:21 PM
ဒီ ပိုစ့် ကို တွေ့တာ သိပ်နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။
Myanmar IT Professional က post တစ်ခုမှာ AutoCAD
တစ်ယောက်က သူ့Discussion မှာ-
(CAD ဆိုတာ Computer Aided Design. Design ကိုနားမလည်ရင် Engineer မဖြစ်ဘူး. ပန်းချီဆရာဘဲဖြစ်မယ်. Designer ခိုင်းတာကို လုပ်ရတဲ့ ပန်းချီဆရာဘဲဖြစ်မယ်. Design ကိုလေ့လာသင့်တယ်. Drawing ကတော့ လက်နဲ့ဆွဲလည်း ဖြစ်တာဘဲ.)
အဲဒီ post ကို ဖတ်ရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Draftsman ဆိုတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာပါ
KPZ ရဲ့ ဒီpost ကို ဖတ်မိတော့ အဲဒီမှာ KPZရဲ့ post ကို
ကူးယူဖော်ပြခွင့် တောင်းဘို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်
ဒါပေမယ့် အခုတော့ မပြောတော့ပါဘူး
KPZ ကိုတော့ ကျေးဇူးပါ
You are viewing "Draftman တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်"
Filed under Labels: မှတ်စု